အက်ပဲလ်ထုတ်ကုန် | အိုင်ဖုန်းသတင်း
အားလုံးအကြောင်း Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ iPhone မဟုတ်တာ၊ Apple နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းမှန်သမျှကတော့ iPhone နဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူး။ App Store အကြောင်းပြောကြမယ် အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုးကဲ့သို့သောအခြား iDevices ကိုကျော် Apple TV၊ iPad၊ iPod Touch; iTunes, iCloud နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် iPhone မဟုတ်ဘဲ Apple နှင့်ပတ်သတ်သောသတင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ။
Apple သည် ၎င်း၏ augmented reality မျက်မှန်များကို ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ထံ ပေးအပ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ထွက်ပေါ်လာသော သတင်းအချက်အလတ် ပမာဏသည် များပြားလှသည်။ အထူးသဖြင့် ထိုသို့သောအချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် ...
HomePod အသစ်သည် ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ရောက်ရှိလာနိုင်သည်။
Ming မှဖော်ပြချက်အရ Apple သည် ယခုနှစ်ကုန်တွင် HomePod အသစ်ကို မိတ်ဆက်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဟု Ming...
Apple Watch Series 8 နှင့်ပတ်သက်သည့် ကောလဟာလများသည် ပြားချပ်ချပ်ဒီဇိုင်းဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ပေါင်း .
Apple Watch သည် သုံးစွဲသူများစွာအတွက် မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာပြီး အသစ်နှင့်ပတ်သက်သော မျှော်လင့်ချက်များ...
por အဲလက်စ်ဗစ်ဆန်တီ လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်ပေါင်း .
Aqara သည် ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်စတိုးကို Amazon Spain တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Aqara သည် Amazon Spain တွင် ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ရရှိနိုင်သည်...
မည်သည့်နေရာမှမဆို italki ဖြင့် သင့်ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဘာသာစကားများကို လေ့လာပါ။
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသည် အမြဲတမ်း universal language ဖြစ်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် နားလည်နိုင်သော ဘာသာစကားဖြစ်သည်ကို မည်သူမျှ မငြင်းနိုင်ပါ။
Apple သည် 2022 ခုနှစ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး စျေးသက်သာသော Apple TV အသစ်ကို မိတ်ဆက်တော့မည်ဖြစ်သည်။
Apple TV သည် Apple ကြီးကြီးမားမားအတွက် အချိန်အလုံအလောက်မရှိသော သို့မဟုတ်...
Apple သည် ရောင်းချမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် တစ်ခုတည်းသော မော်ဒယ်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပြီးနောက် iPod ကို ပြတ်ပြတ်သားသား နှုတ်ဆက်လိုက်သည်...
Apple Watch ၏ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စက်လုံး၏ သမိုင်းကြောင်းကို သိချင်သည်။
Apple Watch တွင် စက်လုံးများစွာရှိပြီး ၎င်းနှင့်မလုံလောက်ပါက အများစုမှာ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်...
AirPods Pro2ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ AirPods Max အတွက် အရောင်အသစ်များ
Apple ၏ ပထမဆုံး headphones ဖြစ်သော AirPods Max သည် အရောင်လက်တစ်ဆုပ်စာဖြင့် ရောက်ရှိလာသည်...
Apple Watch သည် ရိုးရှင်းသော EKG ဖြင့် နှလုံးပျက်ကွက်မှုကို သိရှိနိုင်သည်။
လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရ ကျွန်ုပ်တို့၏ Apple Watch သည် ရောဂါလက္ခဏာများမပြမီ နှလုံးခုန်နှုန်းကို စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ခြေကို တိုးတက်စေသည်...
Model နှင့် GPS နှင့် model + GPS + ဆယ်လူလာနှင့်ခြားနားမှုကားအဘယ်နည်း။
WhatsApp ကို Apple Watch မှာဘယ်လိုထားမလဲ
iPhone ကို TV သို့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲ
Apple Watch နှင့် Activity သည်၎င်းကိုနားလည်ရန်သော့ချက်များဖြစ်သည်
အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်ဒ်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော Firmware ကို iTunes ဘယ်မှာသိမ်းထားလဲ။
iCloud သိုလှောင်မှုအပို ၀ ယ်တာလား။
Apple TV တွင် Safari ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
သင်ယုံကြည်ရသော Apple ပစ္စည်းများကိုမည်သို့ပြုပြင်မလဲ